पीपीएल फाइनलः पारस भरसेस शरद, उपाधी कसलार्इ? | Suvadin !
पीपीएल फाइनलः पारस भरसेस शरद, उपाधी कसलार्इ?
पोखरा प्रिमियर लिग पीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज घरेलु टोली पोखरा पल्टन र चितवन राइनोजबीच प्रतिस्पर्धा हुदैछ। पोखरा रंगशालामा हुने फाइनलमा पोखरा पल्टन र चितवन राइनोज मध्ये कुनै टिमले पहिलो पटक आयोजना भएको पीपीएलको उपाधि जित्ला भन्ने दर्शकमाझ काैतहल्ता बढेको छ। कप्तान पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको चितवन र शरद भेषवाकरको कप्तानीमा रहेको पोखरा आमनेसामने हुदैछन्।
Nov 06, 2018 08:22
पारस खड्का र शरद भेषवाकर।
पोखरा, २० कात्तिक – पोखरा प्रिमियर लिग पीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज घरेलु टोली पोखरा पल्टन र चितवन राइनोजबीच प्रतिस्पर्धा हुदैछ।
पोखरा रंगशालामा हुने फाइनलमा पोखरा पल्टन र चितवन राइनोज मध्ये कुनै टिमले पहिलो पटक आयोजना भएको पीपीएलको उपाधि जित्ला भन्ने दर्शकमाझ काैतहल्ता बढेको छ। कप्तान पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको चितवन र शरद भेषवाकरको कप्तानीमा रहेको पोखरा आमनेसामने हुदैछन्।
दुवै टिम उतिकै बलियो रहेका छन्। दुई टिमको लक्ष्य एकले अर्कालाई पराजित गर्दै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको पोखरा प्रिमियर लिगको उपाधि उचाल्नु हो। यसअघि हिजो सोमबार भएको प्रिम्याच कन्फ्रेन्समा पनि दुवै टिमका कप्तानले उपाधि जित्ने दाबी गरेका छन्।
लिग चरणको खेलमा भने पोखरा पल्टनले ५ विकेटले चितवनलाई पराजित गरेको थियो। १४१ रनको चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको पोखराले १७.२ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गरेको थियो। आजको फाइनल खेलमा भने कप्तान पारसको टिम चितवन बदला लिने दाउँमा छ तर पोखरा भने आफ्नो जितलाई निरन्तरता दिदै उपाधि उचाल्ने रणनीतिमा छ।
यसअघि चितवन राइनोज इलिमिनेटर खेलमा काठमाडौं रोयल्सलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो। यता, पोखरा भने लिग चरणको खेलमा शीर्ष स्थानमा रहदै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पोखराले लिग चरणको ५ खेलमा ३ खेल्मार जित र २ खेलमा हार ब्यहोरेको थियो। तर नेट रनरेटको आधारमा पोखरा शीर्ष स्थानमा रहेको थियो।
त्यस्तै, चितवन र काठमाडौंले पनि ५ खेलमा समान ३ खेलमा जित र २ खेलमा हार ब्यहोरेका थिए। चितवन दोस्रो र काठमाडौं तेस्रो हुदै इलिमिनेटरमा स्थान बनाएको थियो।
पीपीएलको विजेताले २७ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै, उपविजेताले १० लाख नगद प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगिताको म्यान अफ द सिरिज उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र उत्कृष्ट बलरले सुजुकी जिक्सर १ सय ५५ सीसीको मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछन्।